बधाई छ ! ट्याक्सी चालककी छोरी अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति पाइन् ।
संसारको महंगोमध्ये एक र सुविधायु`क्क्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएकी हुन् ।
अस्मिताका बुबा अमृतले छोरी विश्वकै महँगो कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएपछि एकदमै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, “ट्याक्सी चलाएरै मैले महँगो कलजेमा पढाउन सक्दैनथे । तर बीचमा यस्तो मौ`का जु`रेको छ ।
छोरीलाई सस्तो स्कुल भनेर समता स्कुलमा पढाएको थिएँ ।” ३.९ जीपीए ल्याएकी उनी १० कक्षामा हुँदा रिचर्ड म्याकडोनाल्डले मौखिक र लिखित परीक्षा लिएका थिए । करिब पाँचसय जनामा लिइएको परीक्षामा धेरैले भविष्यमा पाइलट, डाक्टरलगायत बन्ने भनेका थिए भने अस्मिताले म्युजिक भनिन् ।
म्याकडोनाल्डले सबैको फरक सोचाइकाबीच आएका मौ`खिक र लिखित कागज लगेका थिए । त्यसमध्ये अस्मिता छानि`एकी हुन् । उनी सो कलेजमा जीसीएसइ पढ्ने भएकी छन् । अस्मितालाई स्वीजरल्याण्ड पढ्न जाने कुरा पहिला नै थाहा थियो ।
२०७७ चैत्र ५, बिहीबार ०२:०७ गते0Minutes 623 Views
ज्ञानेन्द्र शाहीको खुलासा,जनताको वलि दानबाट बनेको संबिधान ५९ अर्वमा बेचिदैछ ।
विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई पुन: पीसीआर गर्नैपर्ने बाध्यता ! तीन दिन होटल क्‍वारे’न्‍टिन बसेको १० हजार रुपैयाँ !